अनुप जलोटाकी प्रेम कहानी
प्रेम र प्रेम कहानीबारे जति व्याख्या गरे पनि अपूरै हुन्छ । समाजमा प्रेमको यति गहिरो अर्थ र भाव छ, त्यो वास्ताविक प्रेम–प्रेमीले मात्र बुझ्छन भनिन्छ । प्रेमको विषयमा थुप्रै उपन्यास लेखिएका छन्, फिल्म बनाइएका छन् र विश्व प्रसिद्ध कविता लेखिएका छन् । ती सिर्जनाका पात्रहरू त्यस्तै छन् जसको यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ । सन्दर्भ नामी भारतीय भजन गायक अनुप जलोटा र उनकी प्रमिका जसलीन मथारुको हो ।
भारती हिन्दु धर्म निर्देशित समाजमा जलोटाले ३७ वर्ष कान्छी कन्यासँगको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गरेपछि सबैतिर उनको चर्चा चुलिएको छ । भारतमा जाति र धर्मको विभेद अहिले पनि उत्तिकै छ । विवाहमा धर्म, जात र आर्थिक स्तर नमिल्दा प्रेमप्रेमीले निकै दुःख खेप्नुपर्छ । अहिले एक समूहले त्यही मजाक अनुप जलोटाको उडाउन थालेका छन् । भनिँदैछ, जलोटा र मथारुको उमेर ३७ वर्ष फरक छ । प्रेमिका छोरीको उमेरकी छिन् ।
कहानी उल्टो हुँदो हो त ?
के हुन्थ्यो ? यदि ६५ वर्षीय कुनै भजन गाउने अनि प्रवचन दिँदै हिँड्ने नारीले २८ वर्षीय कुनै सुन्दर, बलियो युवकको हात समातेको भए ? केही महिना अघिको कुरो हो, प्रियंका चोपडाको पनि मजाक उडाईयो किनभने उनले आपूmभन्दा १० वर्ष कान्छो केटा निक जोनाससँग मगनी गरिन् । तपाईँ कुनै पनि अखबार पल्टाउनुस्, विवाहको विज्ञापन हेर्नुस्, यदि केटा २८ वर्षको छ भने उसलाई २१ देखि २८ को बीचकी केटी चाहियो । यदि केटो ३८ सालको छ भने उसलाई २५ देखि ३५ को बिचकी केटी चाहियो ।
तर, कुनै यस्तो विज्ञापन देखा पर्दैन जहाँ ६० वर्ष पुगेको पुरुषले विवाहको लागि ५५ देखि ७० वर्ष उमेरको महिला खोजेको होस् । खोजी गर्नु त दुरको कुरा, यस विषयमा कल्पना समेत गर्न चाहँदैनन् । फिल्म कहानीमा पनि ५० वर्ष उमेरको अभिनेतासँग २३–२४ वर्षकी तरुनी अभिनेत्री प्रेमी हुन्छे । र, यसलाई सबैले स्वभाविक रुपमा लिएका हुन्छन् । तर, अभिनेत्री ४० वर्ष उमेर पुगेकी छे भने प्रेम कहानी सकियो । विवाहको मामिलामा १० वर्षको फरकलाई सामान्य रुपमा लिईन्छ । बुढापाकाहरु पनि भन्छन्–महिला पुरुषमा १० वर्षको अन्तर ठिक छ । ठिक यसकारण मान्छन् कि पुरुष राम्रोसँग आम्दानी गर्न सक्नेछ ।
केटी जति सोझी र परतन्त्री छे, त्यति नै सजिलै पति र परिवारको नियन्त्रणमा रहनेछे भन्ने मान्यताबाट निर्दिष्ट भएको देखिन्छ । तर, केटाको उमेर केटी भन्दा १० साल कम छ भने यही फरक पनि धेरै भयानक देखिन थाल्छ । पत्नी या प्रेमीका अनुभवी छे, सही र गलतको समझ राख्छे, आफैँ पैसा कमाउँछे, उसलाई पतिको पैसा र उसको दुनियादारी आवश्यक छैन भने कसैलाई पनि यो मञ्जुर हुँदैन ।
प्रकाशित १३ आश्विन २0७५ , शनिबार | 2018-09-29 05:52:15